Ngisho noma ungeyena umlandeli omkhulu we Cash Buster kusukela IWG, uyobe othanda lo mdlalo omusha kuzo njengoba Super Cash Buster inikeza imiklomelo okukhulu nokungcono kuka Cash Buster. Lokhu osebenzisa free akukho idiphozithi edingekile Umdlalo kuletha kuwe imiklomelo mnandi futhi imithwalo fun.
IWG kuyinto umthuthukisi ehola nabaphakeli inthanethi, osheshayo win imidlalo ilotho abavelele opharetha ukugembula. Le nkampani eyenza imidlalo kuhlanganyele kakhulu futhi ethakazelisayo futhi lokhu osebenzisa free akukho idiphozithi edingekile mdlalo ungomunye wabo.
Lokhu osebenzisa free akukho idiphozithi edingekile umdlalo udlalwa ngokusebenzisa umqulu amadayisi esikhundleni itolitji evamile futhi osebenzisa. Ngaphambi kokuba uqale smashing emabhuloki, udinga ukusetha ukubheja yakho. Setha ukubheja yakho ukuze lemali edingekayo ngokuchofoza (+) futhi (-) izinkinobho. Uma usetha ukubheja, chofoza DLALA ukuze uqalise. Uzothola 8 emiqingweni amadayisi umbala, vele ugingqe le dice ukumambula umbala. Block of nangebala kanye yimuphi block angomakhelwane nangebala kuyochotshozwa endaweni umdlalo. Ithebula umklomelo linamarowu Slots ngemibala ehlukahlukene. Isibalo amabhlogo sephulwe endaweni umdlalo ozonquma ukuthi izikhala eziningi zalowo mbala agcwaliswa ethebuleni umklomelo. Ngakho, Ngokwesibonelo, uma sephulwe 4 amabhlogo elibomvu endaweni umdlalo, 4 Slots lomugqa obomvu uyogcwala ethebuleni umklomelo. Wena ubuye uthole ithuba ukuqoqa izici extra futhi imiklomelo osheshayo njengoba uqhubeka ukushayisa emabhuloki.
Izici eyengeziwe kule osebenzisa free akukho idiphozithi edingekile game:
Uma smash block eye Roll Extra ukuboniswa kuso, uthola i roll esingeziwe idayisi.
Uma smash block elinendawo lemali umklomelo ukuboniswa kuso, uthola ukuthi imali umklomelo.
Uma smash block esesikhundleni umdlalo mini ukuboniswa kuso, uthola ukudlala umdlalo mini-.
Uma ugcwalisa i irowu yonke umbala etafuleni umklomelo, uthola umklomelo esiboniswe ukuthi umugqa.
It mkhulu kulabo kakade kudlalwa Cash Buster, kodwa uzobe ezijatshulelwa Wabasaqalayo ngokulinganayo. I RTP salokhu khulula osebenzisa kungekho idiphozithi edingekile umdlalo imayelana 88.25%.
Best UK Casino Sites Offers | £5 No Deposit | Kuya ku…